Amanqaku kaAmar Kukreja Martech Zone |
Amanqaku ngu Amar Kukreja
U-Amar Kukreja unamava eminyaka kuvavanyo lweSalesforce. Usebenzisa i-Apex kunye nolunye uvavanyo. Ukwabonelela ngezinye iinkonzo ezinxulumene nokuthengiswa, kubandakanya ukuseta kunye nokulawulwa kokuqala kwe-Salesforce Umthengisi weGithub.
Iingcebiso kunye neZenzo eziBalaseleyo zoVavanyo lokuHlanganisa kweNtengiso
NgoLwesine, uJanuwari 19, 2017 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 20, 2017 Amar Kukreja
Uvavanyo lweSalesforce luyakunceda uqinisekise ukudityaniswa kokuthengiswa kwakho kunye nokusebenza kwezinye iinkqubo zeshishini. Uvavanyo olulungileyo lubandakanya zonke iimodyuli zeSalesforce ukusuka kwiiakhawunti ukuya kwizikhokelo, ukusuka kumathuba ukuya kwiingxelo, nakwimikhankaso yokunxibelelana. Njengokuba kunjalo kulo lonke uvavanyo, kukho indlela elungileyo (esebenzayo nefanelekileyo) yokwenza uvavanyo lweSalesforce kunye nendlela embi. Ke, yintoni uvavanyo lweSalesforce elungileyo? Sebenzisa izixhobo zoVavanyo oluLungileyo-Uvavanyo lweSalesforce